Garnaqsi dhex maray Dr. Cali Khaliif iyo Dr. Cali Ciise Cabdi | Welcome to Lafweyne.com|
Garnaqsi dhex maray Dr. Cali Khaliif iyo Dr. Cali Ciise Cabdi
Dr. Cali Ciise: War Cali Khaliifoow sidan aad wax u waddid cidna dani uguma jirtee maad wax ka beddeshid.
Dr. Galaydh: War hooy duruufaha jira ayaadan waxba ka ogayn, haddaad xogogaal ahaan lahayd sidaa imaad tidhaahdeen.
Dr. Cali Ciise: Ummaddani xaq bay u leedahay inay shirto oo danaheeda jirato, xuquuqul insaankaa u ogol waadna ogtahayoo sharciga Jamciyadda Quruumaha ka dhexeysa ayaa xaqaas siiyey bani aadamka oo dhan “Universal Declaration of Human Rights” bishii December ee 1948 ayaa la isla qaatay qaraarkaa!
Dr. Galaydh: War hooy siyaasadda dhabta ahi way ka gun dheer tahay waxa waraaqaha lagu qoro meeshan realpolitik ayaa ka socda
Dr. Cali Ciise: Dadkannaga reer Khaatumo danahooda inay jirtaan baannu doonaynaa, xaq bayna u leeyihiin inay shiraan waana denbi in la is hortaago ummad rabta inay danahooda ka wada hadlaan. Shirka Buuhoodle in laga hor yimaaddaa waxay xadgudub ku tahay qodobka 20aad ee xuquuqul insaanka firqadiisa koowaad . Article 20 “(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association”.
Dr. Galaydh: War hooy siyaasaddu waxay isugu soo ururtaa maxaa dan ah, ama maxaa suurto gal ah. war hooy dadkan dantooda annagaa kaa og annagaa madax u ah oo naloo doortay. Nin debedahaa wareegaya oo aan war u hayn wax lagu sugan yahay warkiisa dhegeysan mayno.
Dr. Cali Ciise: Saw ma ogid inay denbi tahay in dadka loo diido inay aayahooda ka tashadaan xaggaad ka maraysaa qodobkan UN charterka ku jira ee ah “All peoples have the right to self-determination”
Dr. Galaydh: War hooy caqli baa loo baahan yahay “war soow sagaaro ima barato” waxan aad ku wareertay wax dhab u shaqeeya maaha dadkeenna oo kalena maba khuseeyaan. War hooy Islaanta Xaawa Jaamac iyo Qarad Yuusuf iyo odayga Dhallaamacune iyo Xagarburburis ratiga dhaanka ah wata waxan aad ka hadlaysaa waxba uguma filna. War hooy dadkani biya ay cabbaan iyo nabad ay deriskooda kula noolaadaan iyo in adhigooda loo dhibeeyo ayay u baahan yihiin. war hooy Siyaasada dhabta ahina waa ta ka turjunta dadka ay taabanayso. War hooy hadalkii Tip O’Neill aan ku xusuusiyo “all politics is local”.
Dr. Cali Ciise: Annaga dadkannagu ma aqbali karayaan in Soomaali la kala gooyo iyo in nimankaa go’ay ee Soomali Galabeed wax lagu darsado toonna.
Dr. Galaydh: War hooy Soomaali Galbeed nimankan lama yidhaahdo, waxa laga yaabaa inaad Waqooyi-Galbeed maqashaye. War hooy nin xogogaalnimadiisuba sidaa tahay ummaddan waxba uguma filnee adna ha is wareerin annagana ha na wareerin. War hooy dastuurkayagaa qoraya inaannu la hadalno ciddii dani naga gasho, dastuurkaasaa adna ku xukuma oo aad hore u aqbashay, war hooy isaga aynu ku ekaanno oo ixtiraamno. War hooy haddaad kaa ka gudubtid waxaan ku leeyahay “wallee karis xumeey adna ku wax li’id”
Dr. Cali Ciise: Annga ummaddannadu ma qaadan karayso in la yidhaahdo ciidammada Khaatumo iyo kuwa Somaliland ayaa la isku dhafayaa oo dadkannaga ayay ka hor istaagayaan inay shiraan.
Dr.Galaydh: War hooy qodobkaas adigaa qoray oo wax ka saxeexay “go back to Addis memo articles 4 and 5”. War hooy hadalkani mid aan sadalag isaga leeyahay maaha. War hooy qodobka afraad iyo kan shanaad ayaa si qayaxan u qeexaya in meel looga soo wada jeesto wixii wadahadalladaa Khaatumo iyo Somaliland carqalad ku keenaya iyo in maamul daadejin la sameeyo! War hooy UN Charter iyo wax rag kale samaysteen intaad ku wareeraysid kaad adigu saxeexday oo wax ka qortay hoos u dhugo oo ku dhaqan.